Uzithibe ngocansi yemuka inkosikazi
AKAFUNI ukuvumela ukuphoxeka ngokuphela komshado wakhe kuqede uthando lwabesifazane, uMfundisi Cedric Zulu okungaphelanga ngisho inyanga eshadelwe
BONGIWE ZUMA | October 6, 2019
UKUZITHIBA ocansini esalinde ukubopha ifindo likasofasilahlane nesithandwa sakhe abesilobola, yikona okugcine kubhedisa izinto emshadweni womfundisi waseMpumalanga.
UMfundisi Cedric Zulu (29) weNew Jerusalem Church kuphele izinsuku eyisishiyagalolunye eshadelwe, kwakhala idivosi, eshadelwe ekuqaleni konyaka ngoFebhuwari 9.
Uyindaba egudwini ezinkundleni zokuxhumana ngemuva kokuthi eveze lokhu ekubeni abantu bencoma ubukhazikhazi bosuku lomshado wakhe.
Echaza kabanzi ngalolu daba, abe madolonzima ukukhuluma ngalo, uZulu uthe izinsuku eziyisishiyagalolunye wukuhloniphisa nje, empeleni umshado ube ngowezinsuku ezimbili.
Izinto zonakale ngobusuku bokuqala izithandani zindawonye eholidini eliyaye lithathwe yizithandani ezisuke zisanda kushada, eThekwini.
“Ngahlala unyaka ngingamthinti (bengayi ocansini) ngilinde usuku lomshado. Nangempela lwafika, okunye okwalandela lapho kwangiphoxa ngendlela engachazeki.
“Angizimisele ngokuthi ngihlambalaze ebengishade naye, okunye kuphakathi kwethu. Kodwa indlela okwenzeka ngayo, esengichapha ngenhlamba, engibiza ngesiyoyoyo sendoda ngoba nje bengingamkhombi embhedeni, kungibeke esimeni sokuthi bengingenza noma yini.
“Ngabanjwa ukukholwa neziyalo zabazali bami,”kusho uZulu.
Uthe kube yisikhathi esinzima kakhulu njengoba bekumele athule angakhulumi ngokuthi umshado wakhe ube owenzinsuku ezimbalwa phezu kokuba elinde unyaka wonke, wachitha nemali eshisiwe elobola ngokunjalo nangosuku lomshado.
Exinwa ngemibuzo mayelana nokwenzeka ngobusuku bokuqala, uZulu uthe angakusho wukuthi ukuphoxeka aba nakho ngeke akufanise nalutho empilweni yakhe.
“Amazwi agcina engihlala kakhulu awokuthi lo wesifazane ebengimshadile angitshele ukuthi angindoda yalutho....ngangizitshela ukuthi ngimphathe kahle futhi engakwenza kuyiphupho lawo wonke owesifazane, ukuthi aqale ashadwe kuqala kuyima kukhulunywa ngocansi,” kusho uZulu ongusomabhizinisi.”
Indaba kaZulu eqale ezinkundleni zokuxhumana, uthe iqale ngokuthi abantu bancome ubuhle bomshado wakhe.
“Ibingidla le nto ngaphakathi ukuthi nginconywa nje kwalowo mshado awusekho. Ngemuva kokuhamba odokotela abeluleka ngokomqondo, ngigcine ngiphendula ngiveza ukuthi umshado wami awusekho.”
Uthi ukuphumela kwakhe obala kuyingxenye yokuthi le nto igcine idlulile.
Eqhuba uveze ukuthi yize ewumfundisi kodwa ibandla alizange limthwese icala noma limvalele ngaphandle ngokubheduka kwezinkinga emshadweni.
Mayelana nokuthi babehlanganephi nesithandwa sakhe, uZulu uthe abakhonzi naye owesifazane, ukhonza kwelinye ibandla.
Konke abebekwenza bebelandela inqubo yebandla njengoba kwaxhumana abefundisi nabazali ngaphambi kwezinhlelo zokulobola.
Imizamo yokuzwa ukuphawula kowesifazane obeshade noZulu igcine ingaphumelelanga.
Njengamanje laba abebeyizithandani sebelinde usuku inkantolo ezoklebhula ngalo incwadi yomshado.
UZulu uthi usazimisele ukuthi aphinde athole umaqondana, inhliziyo yakhe isiyamukelile.
“Ngikulungele ukuthola umaqondana, ngikhulekela okunguyena yena. Ngizimisele ngokumthanda ngokweqiniso, ngingambeki amacala omunye umuntu. Nabantu besilisa abake baphoxeka njengami ngiyafisa babhodle, baxole ukuze impilo iqhubeke,” kusho uZulu.